दशैँमा घर फर्कँदै हुनुहुन्छ ? एअरपोर्टमा यी सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन् - Chandragiri News
Home समाज दशैँमा घर फर्कँदै हुनुहुन्छ ? एअरपोर्टमा यी सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन्
दशैँमा घर फर्कँदै हुनुहुन्छ ? एअरपोर्टमा यी सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन्
२०७४, २० भाद्र मंगलवार १९:४७
दशैं-तिहार मनाउन विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? घर फर्किँदा के-के समान लैजान पाइने/नपाइने हो भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ होला । सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किनेहरुका लागि विभिन्न वस्तुमा भन्सार नलाग्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
कतिपय समान ल्याउनै पाइँदैन भने केही समान भन्सार नतिरी ल्याउन पाइन्छ । कतिपय सामानको भन्सार तिर्नुपर्छ ।त्यसैले एयरपोर्टमा आएर झन्झट ब्यहोर्नुभन्दा पहिले नै यस विषयमा जानकार हुनु राम्रो हुन्छ ।
के-के सामन विदेशबाट ल्याउँदा एयरपोर्टमा भन्सार शुल्क लाग्दैन भन्ने अलमल जानकारी राख्दा सास्ती खेप्नु पर्दैन । सरकारकाे झिटिगुन्टा आदेशअनुसार मात्रै समान खरिद गर्नुहोला ।
विदेशबाट आउँदा घरमा केही सामान लिएर फर्किने मन सबैलाई हुन्छ । विदशेबाट फर्किने धेरैले टिभी, मोबाइल, गहना लगायतका सामाग्री ल्याउँछन् । त्यसबारे विदेशबाट फर्किनेहरुले जान्नैपर्छ, नत्र ल्याएका सामान जफत हुनसक्छ भने महंगो भन्सार पनि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
दशैंमा विदशेबाट महंगा र ब्राण्डेड रक्सी ल्याउने प्रचलन छ । तर, धेरै परिमाणमा रक्सी बोक्नुभयो भने पनि समस्या हुनेछ । विदेशबाट १ लिटर मात्रै ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ल्यापटप/कम्प्युटर वा ट्यावलेट, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर, मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ १/१ थान ल्याउँदा पूर्ण भन्सार छुट पाइन्छ । बच्चा राख्ने पेराम्बलेटर र ट्राइसाइकल १/१ वटा ल्याउँदा पनि कुनै भन्सार तिर्नुपर्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तिमा एक वर्ष बिताएका नेपालीले ३२ इन्चसम्मको टिभी ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर, विदेशमा कामका लागि नगाएका र १ वर्ष नबिताएकालाई यो सुविधा छैन ।
विदेशेमा काम गरेर फर्किएकाहरुलाई दर्इ थानसम्म नयाँ मोबाइल ल्याउँदा पनि ब्यवहारिकता हेरेर कडाइ नगर्ने गरेको पाइन्छ ।
औषधि उपचारका लागि विदेश गएका नागरिकले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याउने औषधि र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको सहाराको लागि ल्याइने समाग्रीमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था छ । सात किलोग्रामसम्मको खाद्यवस्तुमा पनि भन्सार शुल्क लाग्दैन ।
व्यवसायिक पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले आफ्नो दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि २/२ थानसम्म ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन सक्छन् ।
चुरोट दुईसय खिल्लीसम्म र सिगार ५० खिल्लीसम्म पनि समदरमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।
अहिले विदेशबाट काँचो सुनचाँदी (ढिक्का सुन) लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउन पाइँदैन । सरकारले गहना बनिसकेका बाहेकको काँचो सुन नेपालमा ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । अहिले सुनका गहना ५० ग्राम र चाँदीका ५ सय ग्रामसम्म मात्रै ल्याउन पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुले १०० ग्रामको ढिक्का सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थाबारेको खबरले धेरैलाई अलमलमा पारेको छ । तर, त्यो बैंकका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनैपनि व्यक्तिले काँचो सुन विदेशबाट ल्याउनै पाउँदैन । तयारी गहना भने ५० ग्रामसम्म ल्याउन अनुमति हुन्छ । यसमा कुनै भन्सार पनि लाग्दैन ।
Previous articleअर्को हप्ताबाट नयाँ नोट सटही गर्न पाइने
Next articleअब तिन दिन मात्र बाकी